१) अलिफ, लाम, मिम, रा, यी कुरआनका आयत हुन्, र जुनसुकै तपाईतर्फ तपाईको पालनहारबाट उतारिएकोछ, सबै सत्य हुन् । तापनि अधिकांश व्यक्तिहरू ईमान ल्याउदैनन् ।
२) अल्लाह त्यो नै हो जसले आकाशहरूलाई बिना खम्बा ठड्याइदिएको छ, जसलाई तिमी देखिरहेका छौ, फेरि ऊ अर्श (सिंहासन) माथि उच्च भयो । उसैले सूर्य र चन्द्रलाई आफ्नो अधीनमा राखी राखेको छ । हरेक निश्चित प्रक्रियामा गतिशील छन्, उसैले सबै कार्यको उपाय गर्छ । उसले आफ्ना प्रमाण–प्रतीकहरू स्पष्टरूपमा बयान गरिरहेको छ, कि तिमी आफ्नो पालनहारसँगको भेटलाई विश्वास गरिहाल ।
३) उसैले धर्ती फैलाएर ओछ्याई दिएको छ, र त्यसमा पहाड़ र खोलाहरू निर्माण गरिदिएको छ, र त्यसमा किसिम किसिमका फल–फूलहरूका जोडा–जोडा दोहोरो–दोहोरो उत्पन्न गरिदिएको छ । उसैले रातलाई दिनबाट छिपाइदिन्छ, निःसंन्देह सोच्ने, बुझ्नेहरूका लागि यसमा धेरै (प्रतीक) चिन्हहरू छन् ।
४) र पृथ्वीमा भिन्न–भिन्न प्रकारका टुक्रा एक अर्कासंग मिल्दाजुल्दा छन् । र अंगूरका बगैचाहरू छन्, र खेतहरू छन्, र खजूरका बोटहरू छन, हाङ्गा भएका र कुनै यस्ता छन् जसमा कुनै हाङ्गा छैनन्, सबैलाई एउटै पानी पिलाइन्छ, तैपनि म एउटालाई अर्को फलमाथि उच्चता प्रदान गर्दछु । यसमा वुद्धिमानहरूका लागि धेरै चिन्हहरू छन् ।
५) यदि तिमीलाई आश्चर्य लाग्छ भने वास्तवमा उनको यो भनाई अजीब छ कि जब हामी माटो भइहाल्छौं तब के हामी नयाँ जन्ममा हुनेछौं । यिनीहरू नै हुन् जसले आफ्नो पालनहारमाथि कुफ्र गरेका छन् , यही नै हुन जसका घाँटीहरूमा पापी पट्टा हुनेछन् र यही नै हुन् जो नर्क (जन्नहम) मा रहनेवाला हुन्, जो यसमा संधै संधैका लागि रहनेछन् ।
६) र जो तिमीबाट (दण्डको प्राप्तिमा) छिटो गरिरहेका छन् राहतभन्दा अगावै नै, जब कि उहाँभन्दा अगाडि धेरै शिक्षाप्रद उदाहरण आइसकेको छ । र तिम्रो पालनहार मुक्ति दिनेवाला छ, मान्छेहरूको नचांहिदो अपराधमा पनि र यो पनि निश्चित कुरो छ, कि तिम्रो पालनकर्ता भयंकर दण्ड दिनेवाला छ ।
७) र काफिरहरू भन्दछन्ः कि उनीमाथि उनको पालनकर्ताको तर्फबाट कुनै चमत्कार किन उतारिएना कुरो यो छः कि तपाई त मात्र सावधान गर्नेेवाला हुनुहुन्छ, र हरेक कौमको लागि (एउटा) मार्गदर्शक छ ।
८) अल्लाह राम्ररी जान्दछ जे स्त्रीको गर्भमा रहन्छ र भूडीको ठूलो सानो आकार पनि, र हर वस्तु उसनिर एउटा निश्चित रूपमा छ ।
९) त्यो प्रत्यक्ष तथा परोक्षको ज्ञाता हो । (सबै भन्दा) महान र (सबैभन्दा) उच्चतम छ ।
१०) तिमीमध्ये कसैले आफ्नो कुरोलाई लुकाएर भनोस् अथवा ठूलो स्वरमा भनोस् र जुन रात्रीमा लुकेको छ र जुन दिउँसोमा भइरहेको छ, सबै अल्लाहको लागि एकैनास छन् ।
११) उसका चौकीदारहरू मान्छेको अगाडि–पाछाडि नियुक्त छन्, जो अल्लाहको हुकुम अनुसार त्यसको चौकसी गर्दछन् । कुनै समुदायको अवस्था अल्लाह बदल्दैन जबसम्म कि त्यसले स्वयं उसलाई न बदलोस् जो उसका हृदयमा छन्, र अल्लाह जब कुनै समुदायलाई दण्डित गर्ने योजना बनाउँछ, त त्यो परिवर्तन हुँदैन । र उसबाहेक कोही पनि उसको योजनाकार छैन ।
१२) त्यो अल्लाह नै हो जसले तिमीलाई चट्याङ्गको चमक भयभीत गर्न र आशा दिलाउनको लागि देखाउँछ, र भारी बादलहरूलाई उठाउँछ ।
१३) बिजुलीको गर्जना उसको पवित्रताको प्रशंसा गर्दछ, र फरिश्ताहरू पनि उसको भयबाट (त्यसै गर्दैछन्) । उही चट्याङ्ग पठाउँछ, र जसमाथि चाहन्छ त्यसमाथि खसाल्छ । जब कि तिनीहरू (बहुदेववादी) अल्लाह वापत झैं–झगडा गरिरहेका छन्, र अल्लाह कठोर शक्तिवाला छ ।
१४) उसैलाई पुकार्नु वास्तविक सत्य छ । जुन मानिस अरुलाई उसको बदलामा पुकार्छन् तिनीहरू उनीलाई केही पनि उत्तर दिदैनन्, बरु यो उस्तै छ जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो दुवै हात पानीतर्फ फैलाएको छ कि उसको मुखमा परिजाओस् जबकि त्यो पानी उसको मुखमा जाँदैन । र काफिरहरूको गुहार सबै खेर जान्छ ।
१५) अल्लाहको लागि नै पृथ्वी र आकाशका सबै प्राणीहरू खुशी र बेखुशी नतमस्तक हुन्छन् र उनका छायाँहरूले पनि विहान वेलुका ।
१६) तपाईं सोध्नुस्ः ‘‘कि आकाशहरू र पृथ्वीको पालनकर्ता को हो ?’’। भनिदिनुस् ! ‘‘अल्लाह’’ । सोध्नुस्ः ! ‘‘के तिमी फेरि पनि उसबाहेक अरुलाई सहयोगी बनाइरहेका छौ ? जो स्वयं आफ्नो जीव ज्यानको राम्रो नराम्रोबारे कुनै अख्तियारी राख्दैनन्’’ । सोधः ‘‘के अन्धो र आँखावाला बराबर हुन सक्छन् ? के अन्धकार र प्रकाश समान हुन सक्छन् ? के जसलाई उनी अल्लाहको साझेदार ठहर्याइरहेका छन, उनले पनि अल्लाह जस्तै प्राणीहरू निर्माण गरेका छन्, जसले उनको दृष्टिमा निर्माणको फर्क शंकाको घेरा भित्र आइसकेको छ’’, भनिदिनुस्ः ‘‘मात्र अल्लाह नै सबै प्राणीहरूको जन्मदाता हो त्यो एक मात्र एक्लो छ र विशाल शक्तिशाली छ ।’’
१७) उसैले आकाशबाट पानी वर्सायो फेरि आफ्नो–आफ्नो क्षमता अनुसार खोलाहरू बग्न थाले, फेरि पानीको भेलले माथि चढेको कूडालाई बगाएर लग्यो । र यस्तै फींज त्यस धातुमा पनि उठीहाल्छ जुन आगोमा हालेर खारिए पछि आभूषण वा अर्काे (सजावटका) समान बन्दछन् । यस्तै किसिमले अल्लाह सत्य–असत्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ, । अब फीज त व्यर्थ भएर बगी हाल्छ, परन्तु जुन मान्छेलाई फाइदा पुर्याउने वस्तु छ, त्यो पृथ्वीमा अडी रहन्छ । अल्लाह यस्तै उदाहरणको वर्णन गर्दछ ।
१८) जुन मान्छेहरूले आफ्ना पालनहारको आदेशलाई पालन गरे तिनीहरूका लागि भलो हुनेछ, र जुन मान्छेहरूले उनको आदेशलाई अवहेलना गरे, यदि उनीहरूका लागि पृथ्वीमा रहेको सबै थोक र त्यति नै अरुभए पनि त्यो सबै आफ्नो मुक्तिको सट्टामा दिन तैयार हुन्छन् । तिनीहरूका लागि नर्क ठेगाना छ, र जुन ज्यादै नराम्रो ठाउँ हो ।
१९) के त्यो व्यक्ति जसले यो ज्ञान राख्दछ कि तपाईतिर तपाइको पालनकर्ताबाट जे उतारिएको छ त्यो सत्य छ, त्यस व्यक्ति जस्तो हुन सक्छ जुन अन्धो छ । उपदेश तिनैले स्वीकार गर्न सक्छन् जो ज्ञानी समझ्दार छन् ।
२०) जो अल्लाहको वाचालाई पूरा गर्दछन् र प्रतिज्ञा भंग गर्दैनन् ।
२१) र अल्लाहले जुन कुरोलाई जोड्ने आदेश दिएको छ उसलाई जोड्छन्, र उनी आफ्नो पालनहारबाट डराउँछन्, र कठिन हिसाबको भय राख्छन् ।
२२) र उनी आफ्नो पालनहारको सहमतिको चाहनाको पूर्तिका लागि धैर्य गर्छन, र नमाजलाई सदैव कायम राख्छन्, र जुन कुरो मैले दिइराखेको छु, त्यसलाई देखाई वा लुकाई खर्च गर्छन, र कुभलोलाई भलाईबाट फाल्छन् उनकैलागि अन्तिमका घर छन् ।
२३) सधैं रहनका लागि फूलबारी, जहाँ उनी स्वयं जान्छन, र उनका पुर्खा र पत्नीहरू र सन्तानहरूमध्येबाट जुन पुण्यआत्मा होलान्, र उनको नजिक फरिश्ताहरू प्रत्येक दैलोबाट आउनेछन् ।
२४) भन्ने छनः कि तिमीमाथि सलामती होस्’’ जो तिमीहरूले धैर्य गर्नुभो र कति राम्रो प्रतिफल छ त्यो अन्तिम घर ।
२५) र जसले अल्लाहको वाचा र आदेशलाई त्यसको बलियोपनापछि भंग गर्दछन् र जुन वस्तुलाई जोड्नको लागि अल्लाहले आदेश दिएको छ उसलाई तोड्छन् र पृथ्वीमा झैं झगडा फैलाउँछन्, उनका लागि तिरस्कारहरू छन् र उनका लागि खराब घर छ ।
२६) अल्लाहले जसको रोजी चाहन्छ बढाउँछ र जसको चाहन्छ घटाइदिन्छ । यिनी त सांसरिक जीवनमा मस्त भइहाले । अतः दुनियाँ त अन्तिम प्रतिफलको तुलनामा अत्यन्तै तुच्छ छ ।
२७) काफिर भन्दछन्ः कि उनिमाथि उनिको पालनकर्ताबाट कुनै चिन्ह किन उतारिएन ? जवाफ दिनुस्ः कि जसलाई अल्लाह बहकाउन चाहन्छ बहकाइदिन्छ, र जुन मानिस उसतर्फ झुके तिनलाई बाटो देखाइदिन्छ ।
२८) जुन मानिसहरूले ईमान ल्याए उनको हृदयमा अल्लाहको चर्चाबाट शान्तिको अनुभूति हुन्छ । सम्झिराख अल्लाहको चर्चाबाटै आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ ।
२९) जुन मानिसहरूले ईमान ल्याए र जसले असल काम गरे उनको लागि सम्पन्नता छ र अति सुन्दर ठेगाना पनि ।
३०) (हे मुहम्मद) यस्तै मैले तपाईलाई यस समुदायमा पठाएको छु, जसभन्दा अगाडि धेरै समुदायहरू गुज्रिसकेका छन् । तपाईले उनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट जो तपाईंमाथि वह्य उतारिएको छ पढेर सुनाउनुस् । यिनी रहमानका मुन्किर हुन् । तपाई भनिदिनुस् कि मेरो पालनकर्ता त उही हो र उसको सट्टा वास्तवमा कोही पनि उपासना योग्य छैन । उसैमाथि मेरो भरोसा छ, र उसैतर्फ मैले फर्किनु छ ।
३१) र यदि कुरआनको माध्यमले पहाड़लाई चलाइदिए हुन्थ्यो, अथवा पृथ्वी टुक्रा–टुक्रा गरिदिएको भए वा मृतहरूसंग कुरो गराइदिएको भए । (तापनि ईमान ल्याउँदैन्थे) सबै कार्य अल्लाहको हातमा छ । तब के ईमानवालाहरूलाई यस कुरामा सन्तुष्ट छैनन् कि ? यदि अल्लाह चाहन्थ्यो भने समस्त मान्छेहरूलाई सही बाटो देखाउने थियो । कुफ्फारलाई त उनको दुष्टयाईको बदलामा सधै कुनै न कुनै कडा दण्ड पुगिरहनेछ अथवा उनका घरहरूको नजिक पुगिरहनेछ, यहाँसम्म कि अल्लाहको वाचा उनको नजिक आई नपुगोस् । निःसन्देह अल्लाह आफ्नो वाचाको विरुद्ध जाँदैन ।
३२) निःसन्देह तपाईभन्दा पहिलेका पैगम्बरहरूको उपहास गरिएको थियो, र मैले पनि काफिरहरूलाई प्रश्रय दिएको थिएँ, अनि उनीहरूलाई समातिएको थियो । (हेर) दण्ड कस्तो रह्यो ?
३३) के त्यो (अल्लाह) जसले प्रत्येक व्यक्तिमाथि उसले गरेको कार्यहरूको, निरीक्षण गर्नेवाला छ, तापनि उनीहरूले अल्लाहको साझेदार ठहराउँछन् । भनिदिनु होस्ः ‘‘उनीहरूको नाम त बताऊ । के तिमी अल्लाहलाई त्यो कुरो सुनाउँदछौ जो त्यो जमिनमा जानेकै छैन । अथवा मात्र सतही–सारहिन कुरो गर्दछौ ? । कुरो यो छः कि कुफ्र गर्नेहरूलाई उनको धोखाहरूलाई सुहाँउदो बनाइदिइएको छ, र उनी असल बाटोबाट रोकिदिइएका छन् । र जसलाई अल्लाहले मार्ग विचलित गर्दछ उसकोलागि मार्गदर्शक कोही पनि छैन ।
३४) उनको लागि संसारिक जिन्दगीमा पनि सजाय छ, र आखिरतको सजाय त अत्यन्त कडा छ । उनीलाई अल्लाहको क्रोधबाट बचाउनेवाला कोही पनि छैन ।
३५) त्यस जन्नत (स्वर्ग) जसको वाचा संयमीहरूलाई दिइएको छ । विशेषता यो हो कि त्यसको तलबाट नहरहरू बगीरहेका छन् । उसका मिष्ठान (फलहरू) सधै रहनेवाला छन् र त्यसको छायाँ पनि । यो नतिजा (परिणाम) छ, सहनशीलहरूको र काफिरहरूको नतीजा नर्क छ ।
३६) जसलाई हामीले पुस्तक दिएका छौं, त्योमध्ये केही तपार्इंमाथि जे उतारिएको छ उसबाट प्रसन्न हुन्छन्, र अर्को समुदाय उसको केही कुराको विपरीत छन् । तपाई घोषणा गरिदिनुस् किः मलाई त यही नै हुकुम दिइएको छ, कि म अल्लाहको इबादत गरूँ र उसको साझेदार न बनाऊँ । मैले त उसैतर्फ बोलाइरहेको छु, र उसैतर्फ मलाई फर्किनुछ ।
३७) यस्तै मैले यस ‘‘कुरआनलाई’’ अरबी भाषामा आदेश उत्तारेको छुँ । यदि तपाईले ज्ञान आइसकेपछि उनको इच्छाहरूको परीपूर्ति गर्नु भयो तब अल्लाहको (सजाय) बाट तपाईंलाई न कोही सहयोगी भेटिनेछ र नत कोही बचाउनेवाला ।
३८) हामीले तपाईभन्दा पहिला पनि धेरै पैगम्बरहरू पठाइसकेका छौं । र हामीले उनीसबैलाई बाल बच्चावाला बनाएका थियौं । कुनै रसूलबाट हुन सक्दैन्थ्यो कि कुनै निशानी बिना अल्लाहको इजाजत लिएर आओस् । हरेक निश्चित वचनको एउटा लिखत छ ।
३९) अल्लाहले जो चाहन्छ मेटाइदिन्छ र जो चाहन्छ ठीकठाक राख्दछ, र ‘‘लौहे महफूज’’ (मूल किताब) उसैको साथमा छ ।
४०) उनीसंग गरीएका वाचाहरूमध्ये यदि तपाईंलाई हामीले कुनै देखाइदिएँ अथवा तपाईलाई मृत्यु नै दिएं, त तपाईंमाथि त मात्र पुर्याइदिनु नै छ, (सत्य–असत्य) छुट्याउने त हाम्रो जिम्मामै छ ।
४१) के उनीहरूले देख्दैनन् ? ‘‘कि हामी पृथ्वीलाई उसको छेउबाट घटाउँदै आइरहेका छौं, अल्लाहले आदेश गर्दछ, कोही उसको आदेशहरूलाई पछाडि गर्नेवाला छैन, उसले छिटै हिसाब लिनेवाला छ ।
४२) उनीभन्दा पहिलाका मन्छेहरूले पनि आफ्नो ढाट्ने कुकृत्यलाई कम गरेका थिएनन्, परन्तु समस्त उपायहरू अल्लाहकै हुन्, जुन व्यक्ति जे पनि गरिरहेको छ, अल्लाहको दृष्टिमा छ, काफिरहरूलाई अहिले थाहा भइहाल्छ कि परलोकको पारितोषिक कसको लागि छ ।
४३) यी काफिरहरू भन्दछनः कि तपाई अल्लाहको रसूल होइन, तपाई जवाफ दिनुस् कि ममा र तिमीमा अल्लाह गवाही दिनेवाला पर्याप्त छ । र ऊ पनि जससंग पुस्तकको ज्ञान छ ।